Guddiga Madaxabanaan ee Dib u heshiisiinta Qaran oo soo dhoweeyay heshiiska Doorashooyinka | Somalia News
Guddiga Madaxabanaan ee Dib u heshiisiinta Qaranka ayaa soo dhoweeyay heshiiska Doorashooyinka ee ay dhowaan gaareen Madaxweynaha dowlada federalka iyo madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir.
Qoraal ka soo baxay guddiga dib u heshiisiinta qaran ayaa lagu sheegay kadib kulan ay yeesheen xubnaha guddigan ayaa lagu soo dhoweeyey heshiiskan iyagoo bogaadiyay tanaasulka iyo dulqaadka uu sameeyay Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
War saxaafadeedka ay soo saareen guddigan ayaa sidoo kale lagu soo dhoweeyay magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Rooble waxaana guddiga uu ugu baaqay golaha shacabka inay meelmariyaan heshiiska la gaaray.
Halkan hoose ka aqriso war saxaafadeedka guddiga dib u heshiisiinta qaran;
iyo Ra’iisul Wasaaraha cusub
The post Guddiga Madaxabanaan ee Dib u heshiisiinta Qaran oo soo dhoweeyay heshiiska Doorashooyinka appeared first on Jowhar Somali news Leader.
Next articleMaxaadan ogeyn oo ay ciidamada DF ka wadaan Galmudug?